လှတျမွောကျနယျမွကေ ဟားငါးကောငျ အဖှဲ့ကို နောကျကှ ယျကထောကျပံ့ေ နတယျလို့ သတငျးလှငျ့နတေဲ့ ဟနျငွိမျးဦးကို ပညာသား ပါပါပွနျလညျတုံ့ပွနျွေ ဖရှငျးလိုကျတဲ့ ကောငျးကြျော – Shwe Likes
Shwe | April 18, 2022 | Celebrity | No Comments
ဝါရငျ့ လူရှငျတျော တဈယောကျ လညျးဖွဈ သလို ဟာသ သရုပျဆောငျ တဈယောကျလ ညျးဖွဈတဲ့ ကောငျးကြျောကတော့ သူ့ ရဲ့အပွငျက ပုံစံကလ ညျး ပြျောပြျောနပွေီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနတေတျ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
နာမညျကွီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကောငျးေ ကျြာဟာ ဒီကနမှေ့ာေ တာ့ ဟနျငွိမျးဦးရဲ့ တယျလီဂရမျခြ နျနယျကနေ မတရား စှပျစှဲခံ ခဲ့ရပွီး ဖွရှေငျးခကျြ ထုတျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ကောငျးကြျော က “ငါ့အလှညျ့တော့ ရောကျပီ ထငျတယျ။ မိတျဆှေ တှကေ cb ကနလောပွောမှ သိရတယျ။ ဟနျငွိမျးဦး ဆိုသူကဘာ ရေးထားသ လဲပေါ့? သူရေးထားတဲ့အခကျြ အလကျတှေ သခြော ဖတျမိတော့မှဘဲ ကိုယျ့ဘာသာပွုံးမိတော့တယျ။ လိုငျးပျေါမှာ အမွဲ မိုကျရိုငျးနတေဲ့ ကောငျးကြျော တဲ့ fb စသုံးကတညျး ကခုခြိနျထိ ၁ဝနှဈနီးပါး အကောငျ့ထဲမှာ fi ဖွဈနကွေတဲ့ နယိပါ ယျအစုံက မိတျဆှတှေေ
ကောငျးကြျော fb ပျေါမှာ မိုကျရိုငျးတဲ့အရေးအသား ဘယျတုနျးကမှမရေးခဲ့တာကိုသိကွတယျ အနုပညာ သမား(လူရှငျတျော)တဈယောကျမို့ ပွောခငျြတာ ရှိရငျတောငျမှ ရယျစရာလေးေ ရာပီး ယဉျကြေးစှာ အမွဲရေးနတော။(ရိုငျးစိုငျး သော ဆဲရေးတိုငျးထှာ ညဈညမျးစနေိုငျတဲ့ သဘောေ ဆာငျတဲ့ အရေးအသားမြိုးတောငျ အမွဲရှောငျ ခဲ့တယျ။ ကောငျးကြျောနဲ့ ငါးကောငျက တဈဖှဲ့ထဲတှေ တဲ့ “
“ဟုတျရဲ့လား ဟနျငွိမျးဦး ရယျ သခြောလို့လား အခုထိလဲ အဆကျသှ ယျရှိနတေုနျး တဲ့။ အဲ့ဒီအခကျြကတော့ ဝနျခံတယျ နဂို ကတညျးက fb မှာ fri တှဖွေဈနတေော့ ဟားငါးကော ငျနဲ့လဲ အဆကျသှယျရှိတယျ။ ဖိုကျစတားနဲ့လဲရှိတယျ သီးလေးသီးနဲ့လဲရှိ တယျ ခငျလှိုငျနဲ့ လဲရှိတယျ ဒိနျးဒေါငျနဲ့လဲအ ဆကျသှယျရှိတယျ အုနျး သီးနဲ့လဲရှိတယျ
လူရှငျတျောအေ တျာမြားမြားနဲ့ သူတို့ဘကျက ဘလော့တာ မဟုတျခဲ့ ရငျတော့ အကုနျအဆကျသှယျရှိတယျ ။ (ကို ကစပီးတော့ ဘယျ လူရှငျတျောမှ မဘလော့ဘူး) ဘာတဲ့ ဟားငါး ကောငျကို နောကျကှ ယျကနေ ပံပိုးပီး ထောကျပို့ လုပျနတေယျ တဲ့(သခြောရဲ့လား ဟနျငွိမျးဦးရယျ) အဲ့အခကျြေ လာကျရီစရာ ကောငျး တာတှမေရှိတော့ဘူး”
“ဟနျငွိမျးဦးရေ ဟားငါးေ ကာငျ ကို ပံ့ပိုးပွီး ထောကျပို့လုပျဖို့ နေ နသောသာ ကို့မိသားစုနဲ့ကိုယျတောငျမှ မပံ့ပိုး မထောကျပို့နိုငျတဲ့ အပွငျ အလုပျ မရှိလို့ အကွှေးရှငျတှေ သောကျကွှေးတှနေဲ့ တိုငျ တှပေါတျနပေီး မိနျးမက ဈေးမရောငျးတတျ ရောငျးတတျနဲ့ မနကျ စာနဲ့ညစာ နပျမှနျနယေုံလေး မိနျးမထမီနား ခိုစားနရေတာ ကတြော့ မငျးကထညျ့မပွောဘူး
(အရမျးတျောတဲ့ထောကျလှမျးရေး 😊 ဟနျငွိမျးဦးရေ မငျးပေးတဲ့လိပျစာကလဲ အမှနျပါဘဲကှ (မငျး သောကျတလှဲ ပတေဲ့သ တငျးကို ယုံစားပီး တာဝနျရှိ သူမြား လာ ရောကျချေါယူစဈဆေးခဲ့ရငျလဲ အေးဆေးစှာ လိုကျသှားယုံပါဘဲ ငါ့ ညီရယျ) ဟနျငွိမျးဦးရေ မိတျဆှတှေေ ကစိ တျတှပေူပီ ဦးကောငျး ရှောငျတော့ ပွေးတော့တဲ့ ငါကတော့ မငျးပေးထားတဲ့သတငျး အခကျြအလကျ သောကျတလှဲတှေ အခကျြအလကျေ တှက တဈခု မှမဟုတျလို့ (လိပျပွာလုံစှာနဲ့) ရှောငျလဲမရှောငျဘူး ပွေးလဲမပွေး ဘူး စိတျခပြါ”
” မငျးလဲမ ငျးအလုပျ မငျးလုပျနတောမို့ စိတျမဆိုးပါဘူးကှာ။ (အဲ့) ဟနျငွိမျးဦးရေ တဈခုတော့ မငျးကိုအရမျးစိတျ ဆိုတယျကှ မငျး ရှာဖှစေုဆောငျးထားတဲ့ သတငျးအ ခကျြအလကျ ထဲ ငါ့မှာ သူမြား ကိုထောကျပို့ဖိုနနေသောသာ အကွှေးတှနေဲ့တိုငျပါတျနတေဲ့ အကွောငျးကို ထိနျခနျြပီးသတ ငျးမပေးတာကိုတော့အရမျး စိတျဆိုး တယျကှ။ (မငျးသာအဲ့ဒီအ ခကျြအလကျ ကလေးထညျ့ရေးရငျ စတေနာရှငျေ တှကငါ့ကိုသနားပီး ကူညီထောကျပံပေးကွရငျ အကွှေးေ ကွနိုငျတဲ့အခှ ငျ့အရေးကွီးလကျလှတျသှား တာကိုတော့ အရမျးစိတျ ဆိုးတယျကှာ)
“ဟနျငွိမျးဦးဘ ယျသူဆိုတာလဲ ငါမသိသလို မငျးနဲ့ ငါလဲဘာရနျငွိုးမှ မရှိဘူးထငျတာပါဘဲ။ သတငျးပေးရငျ လဲသခြော တိကတြဲ့သတငျး မြိုးပေး ပါကှ။ အကငျြ့နဲ့တူသော အကြိုးဆိုတာ မကွာတတျဘူး ငါ့ ညီရေ။ (ဟနျငွိမျးဦး လိုငျးပျေါတငျပွီး ဖမျးခိုငျး လာရငျ ဟုတျဟုတျ မဟုတျဟုတျ ဖမျးကိုဖမျးရမယျလို့ ဥပဒမှောပွဌာနျး ထားရငျတော့ လဲ ငါတို့တိုငျးသူပွညျသားတှေ ကံကွမ်မာဘဲပေါ့)”ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျ။ Source: Kaung Kyaw’s fb
ဝါရင့် လူရွှင်တော် တစ်ယောက် လည်းဖြစ် သလို ဟာသ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်လ ည်းဖြစ်တဲ့ ကောင်းကျော်ကတော့ သူ့ ရဲ့အပြင်က ပုံစံကလ ည်း ပျော်ပျော်နေပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ် သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းေ ကျာ်ဟာ ဒီကနေ့မှာေ တာ့ ဟန်ငြိမ်းဦးရဲ့ တယ်လီဂရမ်ချ န်နယ်ကနေ မတရား စွပ်စွဲခံ ခဲ့ရပြီး ဖြေရှင်းချက် ထုတ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကောင်းကျော် က “ငါ့အလှည့်တော့ ရောက်ပီ ထင်တယ်။ မိတ်ဆွေ တွေက cb ကနေလာပြောမှ သိရတယ်။ ဟန်ငြိမ်းဦး ဆိုသူကဘာ ရေးထားသ လဲပေါ့? သူရေးထားတဲ့အချက် အလက်တွေ သေချာ ဖတ်မိတော့မှဘဲ ကိုယ့်ဘာသာပြုံးမိတော့တယ်။ လိုင်းပေါ်မှာ အမြဲ မိုက်ရိုင်းနေတဲ့ ကောင်းကျော် တဲ့ fb စသုံးကတည်း ကခုချိန်ထိ ၁ဝနှစ်နီးပါး အကောင့်ထဲမှာ fi ဖြစ်နေကြတဲ့ နယိပါ ယ်အစုံက မိတ်ဆွေတွေ
ကောင်းကျော် fb ပေါ်မှာ မိုက်ရိုင်းတဲ့အရေးအသား ဘယ်တုန်းကမှမရေးခဲ့တာကိုသိကြတယ် အနုပညာ သမား(လူရွှင်တော်)တစ်ယောက်မို့ ပြောချင်တာ ရှိရင်တောင်မှ ရယ်စရာလေးေ ရာပီး ယဉ်ကျေးစွာ အမြဲရေးနေတာ။(ရိုင်းစိုင်း သော ဆဲရေးတိုင်းထွာ ညစ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ သဘောေ ဆာင်တဲ့ အရေးအသားမျိုးတောင် အမြဲရှောင် ခဲ့တယ်။ ကောင်းကျော်နဲ့ ငါးကောင်က တစ်ဖွဲ့ထဲတွေ တဲ့ “
“ဟုတ်ရဲ့လား ဟန်ငြိမ်းဦး ရယ် သေချာလို့လား အခုထိလဲ အဆက်သွ ယ်ရှိနေတုန်း တဲ့။ အဲ့ဒီအချက်ကတော့ ဝန်ခံတယ် နဂို ကတည်းက fb မှာ fri တွေဖြစ်နေတော့ ဟားငါးကော င်နဲ့လဲ အဆက်သွယ်ရှိတယ်။ ဖိုက်စတားနဲ့လဲရှိတယ် သီးလေးသီးနဲ့လဲရှိ တယ် ခင်လှိုင်နဲ့ လဲရှိတယ် ဒိန်းဒေါင်နဲ့လဲအ ဆက်သွယ်ရှိတယ် အုန်း သီးနဲ့လဲရှိတယ်
လူရွှင်တော်အေ တ်ာများများနဲ့ သူတို့ဘက်က ဘလော့တာ မဟုတ်ခဲ့ ရင်တော့ အကုန်အဆက်သွယ်ရှိတယ် ။ (ကို ကစပီးတော့ ဘယ် လူရွှင်တော်မှ မဘလော့ဘူး) ဘာတဲ့ ဟားငါး ကောင်ကို နောက်ကွ ယ်ကနေ ပံပိုးပီး ထောက်ပို့ လုပ်နေတယ် တဲ့(သေချာရဲ့လား ဟန်ငြိမ်းဦးရယ်) အဲ့အချက်ေ လာက်ရီစရာ ကောင်း တာတွေမရှိတော့ဘူး”
“ဟန်ငြိမ်းဦးရေ ဟားငါးေ ကာင် ကို ပံ့ပိုးပြီး ထောက်ပို့လုပ်ဖို့ နေ နေသာသာ ကို့မိသားစုနဲ့ကိုယ်တောင်မှ မပံ့ပိုး မထောက်ပို့နိုင်တဲ့ အပြင် အလုပ် မရှိလို့ အကြွေးရှင်တွေ သောက်ကြွေးတွေနဲ့ တိုင် တွေပါတ်နေပီး မိန်းမက ဈေးမရောင်းတတ် ရောင်းတတ်နဲ့ မနက် စာနဲ့ညစာ နပ်မှန်နေယုံလေး မိန်းမထမီနား ခိုစားနေရတာ ကျတော့ မင်းကထည့်မပြောဘူး
(အရမ်းတော်တဲ့ထောက်လှမ်းရေး 😊 ဟန်ငြိမ်းဦးရေ မင်းပေးတဲ့လိပ်စာကလဲ အမှန်ပါဘဲကွ (မင်း သောက်တလွဲ ပေတဲ့သ တင်းကို ယုံစားပီး တာဝန်ရှိ သူများ လာ ရောက်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရင်လဲ အေးဆေးစွာ လိုက်သွားယုံပါဘဲ ငါ့ ညီရယ်) ဟန်ငြိမ်းဦးရေ မိတ်ဆွေတွေ ကစိ တ်တွေပူပီ ဦးကောင်း ရှောင်တော့ ပြေးတော့တဲ့ ငါကတော့ မင်းပေးထားတဲ့သတင်း အချက်အလက် သောက်တလွဲတွေ အချက်အလက်ေ တွက တစ်ခု မှမဟုတ်လို့ (လိပ်ပြာလုံစွာနဲ့) ရှောင်လဲမရှောင်ဘူး ပြေးလဲမပြေး ဘူး စိတ်ချပါ”
” မင်းလဲမ င်းအလုပ် မင်းလုပ်နေတာမို့ စိတ်မဆိုးပါဘူးကွာ။ (အဲ့) ဟန်ငြိမ်းဦးရေ တစ်ခုတော့ မင်းကိုအရမ်းစိတ် ဆိုတယ်ကွ မင်း ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ သတင်းအ ချက်အလက် ထဲ ငါ့မှာ သူများ ကိုထောက်ပို့ဖိုနေနေသာသာ အကြွေးတွေနဲ့တိုင်ပါတ်နေတဲ့ အကြောင်းကို ထိန်ချန်ပီးသတ င်းမပေးတာကိုတော့အရမ်း စိတ်ဆိုး တယ်ကွ။ (မင်းသာအဲ့ဒီအ ချက်အလက် ကလေးထည့်ရေးရင် စေတနာရှင်ေ တွကငါ့ကိုသနားပီး ကူညီထောက်ပံပေးကြရင် အကြွေးေ ကြနိုင်တဲ့အခွ င့်အရေးကြီးလက်လွတ်သွား တာကိုတော့ အရမ်းစိတ် ဆိုးတယ်ကွာ)
“ဟန်ငြိမ်းဦးဘ ယ်သူဆိုတာလဲ ငါမသိသလို မင်းနဲ့ ငါလဲဘာရန်ငြိုးမှ မရှိဘူးထင်တာပါဘဲ။ သတင်းပေးရင် လဲသေချာ တိကျတဲ့သတင်း မျိုးပေး ပါကွ။ အကျင့်နဲ့တူသော အကျိုးဆိုတာ မကြာတတ်ဘူး ငါ့ ညီရေ။ (ဟန်ငြိမ်းဦး လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ဖမ်းခိုင်း လာရင် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဖမ်းကိုဖမ်းရမယ်လို့ ဥပဒေမှာပြဌာန်း ထားရင်တော့ လဲ ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကံကြမ္မာဘဲပေါ့)”ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Kaung Kyaw’s fb
မမနေို့ငျစရာ ဇာတျသိမျးပိုငျးလေး ကို မကွေးစညျအဖှဲ့မှ ညီအဈကိုမောငျနှမမြားနဲ့အတူ ကွညျ့ကာ နှုတျဆကျခဲ့တယျဆိုတဲ့ မမေီကိုကို